Mahabe fanahiana ny karazana valanaretina | NewsMada
Mahabe fanahiana ny karazana valanaretina
Amin’izato ady amin’ny firongatry ny valanaretina Covid-19 izao, tsy nampoizina ny karazana avy atsy Afrika Atsimo? Ity hoe andiany faharoa… Saika nitompoana teny fantatra talohaloha teo ny hoe tsy hisy izay andiany faharoa, tsy hiverina amin’ny fihibohana. Akory atao? Tsy fandatsana, sanatria, fa tsy maintsy atrehina izay mitranga.
Mahery vaika kokoa ny fisehoan’aretina, mitombo isa kokoa ny mitondra tsimokaretina, haingana kokoa ny fifindrany, mora kokoa ny fivadihan’ny aretina ho anatin’ny fahasarotana, betsaka kokoa ny isan’ny marary mamoy aina… Misy itandremana sy iambenana amin’izay atao izany rehetra izany, indrindra ny fitsinjovana ny hoavy.
Amin’izao, misy mandefa resaka ary efa manahy aza ny mety hidiran’ny karazana Covid-19 avy any Inde: tena mahery vaika fa karazana roa mitambatra. Mbola hisy hihevitra sy ho sahy hiteny indray ve hoe tsy ho tonga izany? Na hamendrofendro an-toerana ambony ihany, sanatria, fa tsy maintsy ho avy izany na efa an-dalana aza.
Inona ny (h)atao fa izay heverina sy lazaina, mety hanahirana avokoa: tsy mampatokitoky tena, manakorontana ny hafa. Tsy hita maso ny fahavalo, tsy fantatra na tsy voafaritra be ihany izay tena fisehony sy fivoarany… Na ny mieritreritra izany aza, mety hampihena ho azy ny hery fiarovan’ny sasany, hampiakatra hafanana, hanempotra…
Ao anatin’ny ady ny rehetra izao: mety hampandraiki-marary ho azy ny sasany izay lazaina sy re, izay hita sy aseho… ? Mila fitandremana fa haingam-pifindra ny resaka mandeha na alefa etsy sy eroa, mety hahery vaika raha tsy voatandrina, mitondra ho amin’ny fahasarotana aza raha tsy voafehy… Mampidi-doza kokoa no ho ny tena aretina?
Eo ihany izay fanahiana karazana Covid-19 fa ny tsimoka tsaho na vaovao tsy voamarina, mety ho lasa korontana. Na ny fanahiana amin’ny famafazan-dresaka amin’izay mety hitranga, na ny fitompoan-teny fantatra fa tsy misy ahina izay mety ho avy… Tsy misy toy ny mitandrina sy miambina fa loza no atrehina ary ady no atao.